Pyelonephritis घर उपचार लोक उपचार। pyelonephritis को लक्षण
घरमा pyelonephritis उपचार यो रोग ग्रस्त गर्ने धेरै मानिसहरू निकै चासो छ। यसलाई अहिले त्यहाँ थप र थप हुन् भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसैले, तपाईं यो मुद्दा राम्ररी विचार गर्नुपर्छ।
रोग को सुविधाहरू
Pyelonephritis - एक संक्रामक प्रकृति संग एक भडकाऊ रोग। यसलाई गैर-विशेष हो। मुख्य वस्तु हार को अन्तस्करणले, को parenchyma को calyx र श्रोणि। nephrosclerosis - समय यो विकृति निको पार्न गर्दैन भने, यो एक थप जटिल रोग विकास गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रस्तुत संक्रमण एक महामारी प्रकृति छैन, तर अवस्थामा संख्या हरेक वर्ष बढ्दै छ। यसबाहेक, मानिसहरूले रोग विभिन्न फारम हुन सक्छ। pyelonephritis घर उपचार प्रभावकारी छ, तर यसको प्रयोग केवल डाक्टर संग परामर्श पछि हुनुपर्छ, र उपचार मा।
रोग कहाँ गर्छ?
पहिलो चरण त्यहाँ यो समस्या छ किन पत्ता लगाउन छ। रोग विकास कारणहरू बीचमा निम्न छन्:
1 समग्र शरीर गरेको प्रतिरक्षाको घटाउनुहोस्।
को अन्तस्करणले देखि मूत्र को2बाधा पुऱ्याएको प्रवाह।
शरीर मा 3. दीर्घकालीन भडकाऊ प्रक्रिया।
4 बारम्बार supercooling।
मानिसहरू लागि5रोग को कारण एक प्रोस्टेट adenoma हुन सक्छ।
घरमा pyelonephritis को उपचार सुरु गर्नु अघि, एक डाक्टर भ्रमण र ठीक समस्या को कारण कारण के निर्धारण गर्न निश्चित हुन। यस मामला मा, तपाईं एक पर्याप्त उपचार प्रदान गर्न सक्छन्।
यो विकृति अक्सर दुई प्रकारका पाइन्छ: तीव्र र क्रोनिक। तपाईं पहिलो बरामद छैन भने रोग को दोस्रो प्रकार मात्र देखिन्छ। अर्थात् तीव्र शुरू गरेर थप गम्भीर लक्षण विशेषता र अक्सर तत्काल चिकित्सा ध्यान आवश्यक।
पुरानो pyelonephritis धेरै लामो लागि फारम विकास हुन सक्छ। लक्षण को बल छैन धेरै व्यक्त गर्न सकिन्छ। तर, कुनै पनि मामला मा, उपचार आवश्यक छ। यो विकृति एकपक्षीय वा द्विपक्षीय हुन सक्छ उल्लेख गर्नुपर्छ।
रोग को symptomatology
घरमा pyelonephritis को उपचार सुरु गर्नु अघि, तपाईं मात्र होइन कारण र रोग को प्रकार निर्धारण गर्न आवश्यक छ, तर पनि सही लक्षण निर्धारण। को तीव्र फारम लागि यस्तो लक्षण द्वारा विशेषता छ:
- सामान्य कमजोरी, टाउको दुखाइ, को उद्भव काम क्षमता कम;
- केही अवस्थामा, सम्भव वाकवाकी र उल्टी मा;
- 40 डिग्री तापमान मा एक तेज वृद्धि;
- यो कटि क्षेत्रमा soreness भुत्ते वर्ण (तीव्रता फरक सिंड्रोम हुन सक्छ);
- यो मूत्र मा purulent स्राव को उपस्थिति।
रोग को पुरानो फारम लागि, यो सबै अघिल्लो लक्षण द्वारा विशेषता छ, बदलिने डिग्री मा व्यक्त गरे। यसबाहेक, यो urination, भोक उल्लङ्घनको गर्न थप गर्न सकिन्छ।
यदि pyelonephritis, लक्षण र रोग को प्रकार मा निर्भर गर्दछ जो उपचार, तपाईं यसलाई देखि छुटकारा प्राप्त गर्न निश्चित हुनुपर्छ। तथ्यलाई कुनै पनि ढिलाइ गम्भीर जटिलताहरू छन् सक्नुहुन्छ। तपाईं लगातार बेचैनी र पीडा महसुस हुनेछ कि बाहेक, तपाईंले गम्भीर भएको अन्तस्करणले बिगार्न सक्छ।
सबै को पहिलो, पुरानो रोग को फारम कहिले काँही deteriorate सक्छ। अनुपचारित बायाँ भने, यो मृगौला विफलता गर्न सक्छ। अंग क्षति सानो अल्सर, abscesses, Carbuncles उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो जटिलता तत्काल शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक छ।
अक्सर मृत्यु जान्छ जो रोग, सबैभन्दा गम्भीर रूप pyonephrosis छ। यस मामला मा, मृगौला पीप को प्रभाव अन्तर्गत नष्ट गरिएको छ। कि, क्षतिग्रस्त अंग पीप, ऊतक क्षय र मूत्र को उत्पादनहरु भरिएको छ छ। यसरी मृगौला अलग cavities हुन्छन्।
सबै कि पछि तपाईं pyelonephritis, लक्षण र यदि उपचार मात्र एक विशेषज्ञ निर्धारण गरिन्छ भनेर बुझ्न छन्।
किनभने लक्षण सारा कहानी देखाउन सक्छ प्रस्तुत विकृति, सही निदान हुनुपर्छ। तथापि, संकेत निदान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। साथै, डाक्टर त्यहाँ सेता रक्तकोषहरू र प्रोटिन संख्या मा एक वृद्धि छ कि छैन भनेर हेर्न बिरामीको रगत र मूत्र परीक्षण गर्ने सल्लाह दिन्छन् हुनेछ। र केही थप परीक्षण जो जीवाणुहरु रोग को causative एजेन्ट छ निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
यसबाहेक डाक्टर रोगी इतिहास सङ्कलन र कि त्यहाँ हालै कुनै पनि भडकाऊ प्रक्रिया थिए हेर्न अझै छ विश्लेषण। तस्विर उत्पादन radiography, excretory urography पूरा गर्नको लागि। यी अध्ययन, आफ्नो घाटा को हदसम्म पनि अन्तस्करणले को आकार सेट गर्न मद्दत गर्नेछ।
सुविधाहरू तीव्र आक्रमण नामेट
यदि pyelonephritis, लक्षण र उपचार डाक्टर निर्धारण गर्न आवश्यक छ। त्यसैले, रोग एक तीव्र फारममा उत्पन्न गर्न सक्छ प्रस्तुत। निस्सन्देह, पर्याप्त बस लक्षण राहत गर्न र यो थियो। समस्या देखा, र यो सम्बोधन हुनुपर्छ।
अक्सर रोगी को एक तीव्र आक्रमण समयमा hospitalized र चिकित्सा उपचार गर्न तोकिएको हुनुपर्छ। त्यो छ, रोगी भएको विकृति को रोगजनकों विरुद्ध प्रभावकारी छन् भनेर एन्टिबायोटिक लिनुपर्छ। साथै, रोगी लिनुपर्छ प्रतिरक्षा-बुस्टिङ लागूपदार्थ, शरीर का प्राकृतिक प्रतिरक्षाको कायम गर्न शरीर मदत जो।
यो चरण मा डाक्टर को सबै शक्तिहरू, सुनिंनु को hotbed हटाउन कसरी लक्षण को हटाउनु र purulent-विनाशकारी को तीव्र प्रकारका को संक्रमण रोक्न मा केन्द्रित छन्। स्वाभाविक, चिकित्सा को पाठ्यक्रम मा, मृगौला समारोह देखि मूत्र को प्रवाह पुनर्स्थापना निश्चित हुन।
को पुरानो प्रकारका परम्परागत उपचार
सधैं एक चिकित्सक संग परामर्श गर्नुपर्छ pyelonephritis लागि लोक उपाय प्रयोग गर्नु अघि। रूढिवादी चिकित्सा जीवाणुरोधी र immunostimulatory लागूऔषधको प्रयोग समावेश छ।
सर्जरी मूत्र को outflow पुनर्स्थापना प्रयोग गर्न सकिन्छ। जब यो छूट चाँडै पर्याप्त हुन्छ। एन्टिबायोटिक मात्र लागूपदार्थ लागि मूत्र को microflora प्रतिक्रिया कसरी दिनुपर्छ। विरोधी भडकाऊ दबाइहरु लागि, यो यस्तो "Nimesil" "Voltaren" को रूपमा लागूपदार्थ प्रयोग गर्न सकिन्छ। गुर्दे रगत प्रवाह को सुधार प्रयोग गर्न सकिन्छ लागि "Trental" "हेपरिन" हो।
तपाईं ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएँ जो pyelonephritis, लोक उपचार को उपचार, विकास, यो एक अतिरिक्त चरण चिकित्सा, रोग को उन्मूलन बढाउने हुनेछ जो हुन सक्छ। तथापि, तपाईं सधैं चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्नुपर्छ।
कसरी रोग गैर-परम्परागत माध्यम को छुटकारा गर्न?
त्यसैले वर्ष धेरै सयौं लागि जडीबुटी धेरै रोगहरु विरुद्ध लड्न हाम्रो सहयोगीहरूले छन्। तपाईं मृगौला pyelonephritis बाहिर पाएका छन् भने, लोक उपचार को उपचार तपाईं यस मामला मा मदत गर्नेछ।
सबैभन्दा प्रभावकारी लोक चिकित्सा विचार गर्नुहोस्:
1 ठूलो चम्चा सन बीउ पानी उम्लिरहेको को कप धमाकेदार हुनुपर्छ। मिश्रण3मिनेट लागि थप उच्च गर्मी मा फोडा हुनेछ। पेय जलसेक पर्याप्त एक घण्टा। तयार पिउन तपाईं आधा कप लागि दुई पटक एक दिन मात्र2दिन आवश्यक हो। यो पेय सुनिंनु कम गर्न र थप तपाईंको अन्तस्करणले शुद्ध गर्न मद्दत गर्नेछ।
तपाईं एक पुरानो pyelonephritis छ 2. भने, लोक उपचार को उपचार धेरै प्रभावकारी हुन्छ। उदाहरणका लागि, हप शंकु को प्रयोग गर्नुहोस्। को शोरबा तयार,2बस Tbsp लिन। कच्चा माल को चम्मच र आफ्नो zaparte आधा पानी उम्लिरहेको एक लीटर। मिश्रण2घण्टा बस्न हुँदैन। भोजन अघि अप एक दिन4पल्ट हुनुपर्दछ पेय उपभोग गर्न। तपाईं केवल आधा कप आवश्यक पिउन।
3. भने मृगौला रोग ठूलो मद्दत buckthorn जामुन छ।
4 मह र viburnum - यो सबैभन्दा भिटामिन र अन्य उपयोगी पदार्थ हालतमा मा धनी छ। एक दवादारू को तयारी को लागि, बस बराबर मात्रा मा कच्चा माल मिश्रण। यसलाई 1 ठूलो चम्चा एक दिन तीन पटक लिनुपर्छ। र यो खाने अघि गर्नुपर्छ।
5 साथै अन्तस्करणले देखि मूत्र प्रस्थान गर्ने क्रममा, प्रति दिन खरबुजा कम्तिमा2किलो खान प्रयास गर्नुहोस्। र यो तपाईँलाई खान कुरा छैन: दिउँसो वा राति।
यो रोग मा उत्कृष्ट मद्दत nettle, bearberry, जई, gryzhnik चिकना, जस्तै जस्तै जडीबुटी एयर सिमसार, camomile, कन्फ्लावर, yarrow। के तपाईं "pyelonephritis" संग निदान भने, हर्बल चिकित्सा एन्टिबायोटिक लागि वैकल्पिक हुन सक्छ। हुनत केही अवस्थामा तिनीहरूले स्थिति बढन छैन ताकि, इन्कार गर्न आवश्यक छन्।
चिकित्सा - छैन रोग को छुटकारा रही मात्र विधि हो। तथ्यलाई दृष्टिकोण कि व्यापक हुनुपर्छ। स्वाभाविक, रोगी आफ्नो आहार र पोषण समायोजन हुनेछ। त्यो तपाईं एक दिन एक आंशिक कम्तिमा 4-5 पटक खान आवश्यक छ। आहार तीव्र देखि बहिष्कृत एकै समयमा, क्यान्ड, धूम्रपान मीठो र धेरै दिलकश। यो आवश्यक छैन मसला, कफी, कोका, सिट्रस रस प्रयोग गर्न छ।
मासु र माछा उसिनेर खाने गर्नुपर्छ। सूप तेल को एक सानो रकम थप्दा, तरकारी मात्र खाना पकाउन राम्रो हो। धेरै उपयोगी कुनै पनि porridge छन्। थप तरकारी र फलफूल खान र सबैभन्दा प्रभावकारी ती उत्पादनहरु यसको संरचना मा फाइबर को एक ठूलो रकम छ भनेर हो।
तपाईं मिठाई दिन सक्दैन भने माथि, सजिलो आफ्नो संख्या सीमित गर्न। को marshmallow, मह, प्यानकेकहरू, जाम खान दिनुभयो। stewed फल, पानी, रस, दूध, दही को पीने। उपयोगी घरेलु पनिर, चीज, खट्टे क्रीम छन्। अन्डा कुनै पनि रूप मा खाएको गर्न सकिन्छ।
शरीर भिटामिन सी र ई प्राप्त गर्ने क्रममा, chokeberry, currant र नितम्ब देखि चाय पिउन प्रयास गर्नुहोस्। मात्र 2-3 पटक एक दिन हुन र तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। प्रति दिन खपत तरल पदार्थ को मात्रा पूर्वप्राथमिक छोराछोरीको 1 भन्दा कम लीटर र एक वयस्क मा 2.5 लिटर हुनुपर्छ।
तपाईं pyelonephritis छ भने, लोकप्रिय उपचार तपाईं चाँडै प्राप्त यो समस्या को छुटकारा मदत गर्न। तर सबै समय मा यो रोकथाम सबै रोगहरु लागि सबै भन्दा राम्रो उपचार छ कि विश्वास थियो।
त्यसैले, तपाईं यो रोग ग्रस्त छैन भनेर क्रममा, कडाई व्यक्तिगत स्वच्छता पालन गर्न, चिसो लिने छैन: प्रयास गर्नुहोस्। यो पनि कुनै पनि संक्रामक वा भडकाऊ प्रक्रिया उपचार गर्न समय छ। आफ्नो आहार हेर्न, पालना, शरीर व्यायाम बलियो प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँछ।
तपाईं कुनै पनि मृगौला समस्या भयो भने, तपाईंले तुरुन्तै रोग पहिचान र चूल्हा निर्मूल गर्न सक्षम हुनेछ जो चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्नुपर्छ। डाक्टर शक्तिहीन हुनेछ जब pathologies कि फारम जान सक्नुहुन्छ किनभने उपचार ढिलाइ गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। यस मामला मा, यो गरे एक मृगौला हटाउने, तर यो निकाय एकदम गंभीर झटका छ।
अब तपाईं पुरानो pyelonephritis जडीबुटी को उपचार कसरी बनाउने थाहा छ। तर, सधैं सावधान र पनि अधिक आफैलाई चोट होसियार हुन। स्वस्थ रहन!
किन गुच्छे कोहनी?
पुरानो hepatitis asymptomatic हुन सक्छ
चक्कर आना, वाकवाकी - हामी अक्सर सामना कि समस्या।
हिप coxarthrosis: लक्षण। हिप coxarthrosis ग्रेड 2: उपचार
Erosive antral gastritis: कारणहरू र उपचार
कति चाँडो फरक हालतमा कालो आँखा बनाउन?
यौन शिशुशोधन (जननांग शिशुशोधन): कारणहरू, लक्षणहरू, उपचार
लौ: संरचना विवरण योजना तापमान
सन्दर्भ लिंक: अवधारणा, समारोह। कसरी सिफारिश आकर्षित पैसा बनाउने?
मास्को मा कति सडकमा - सबैभन्दा लोकप्रिय शीर्षक, राजधानी सबैभन्दा उल्लेखनीय र रोचक सडकमा
म्याग्रोव होटल रस अल खा4(संयुक्त अरब अमीरात / रस अल खामाहा): एक अवलोकन, वर्णन, विशेषताहरू र पर्यटक समीक्षा।
बार्सिलोना Sagrada परिवार अचम्मको छ
म हृदयको जो पक्ष एक व्यक्ति छ आश्चर्य